Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti - WALDAA QULQULLOOTAA | Tibbana
Archive for category: Tibbana
“Abiddaafi Bishaan gidduu nu dabarsite, gara boqonnaattis nu baaste”
July 26, 2016 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
FARSAA DAAWIIT 65/6:12
Manni Qulqullummaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo giiftii qopheedha. Kitaaba Qulqulluu bu’uureffachuun Qulqulloota, Toloota, Wareegamtoota isheef yaadannoo ni taasifti. (Faarsa 111/2:6 ). Haaluma kanaan Manni Qulqulummaan keenya yaadannoo qulqullootaaf taasiftu keessaa guyyaa hangafti ergamootaa Qulqullichi Gabri’eelin Waaqayyo irraa ergamuun wareegama Qulqullicha Qiirqoosiifi haadha isaa wareegamtuu Qulqulleettii Iyyeluxaa bishaan danfaa keessaa baase yeroo maraa Adoolessa 19 kabajamee oola. Mannii amantaa keenya seenaa kabaja ayyaana kanaa gabaabumattii akka armaan gadiitti barsiisti.
Barri sun bara Wareegamtootaa ture. Wareegamaa jechuun ragaa ba’aa, waa’ee amantaa ishee sirriifi mootummaa Waaqayyoof jecha kan dhugaa ba’u jechuu dha. Waqtii sana amantaan kiristaanummaa bal’inaan yeroo itti lallabamuu eegalame, kiristaanotaafi mootota biyyattii giddutti sababa amantaa qofaan garagarummaa guddaafi dhumaati yeroo itti godhamaa tureedha. Sababa kanaan jireenyi kiristaanotaa du’aafi jireenya gidduu yeroo tureefi yeroo qorumsa guddaa, dhiigni kiristaanotaa akka lolaa gannaa yeroo lafarra dhangala’aa tureedha. Bara kana wareegamtoota akka warqee ibiddaafi rakkoon dararamaa amantaa isaanitin cimanii dhabatan keessaa daa’imtichi Qulqulluun Qiirqoosifi haati isaa Qulqulleettii Iyyeluxaan isaan tokko. Wareegamaa Qirqoosiin wareegamtoota kaan irra addaa kan isa taasisu umuriin daa’ima ta’uu isaati.
Qiirqoos biyyi isaa Roomaa, Ixaaliyaa, bakkaa Angabeen (አንገቤን) jedhamtudha. Haati isaa Iyyeluxaa, abbaan isaa Qoozimoos (ቆዝሞስ) jedhamu. Bara mooticha hamaa Diyooqilxiyaanos (bara wareegamtoota) –Diiyooqilxiyaanos mudamee waggaa 20ffaa isaatti bara 303 BA, manneen amantaa kiristaanotaa akka barbadaa’an, manneen xa’otaa akka babal’ataan labsiin labsame. Sababa kanaanis kiristaanootni hedduun ari’ataman. Iyyeluxaanis daa’ima waggaa sadii kan ta’e, mucaa ishee Qiirqoos qabattee gara Iqooniyoosittii baqatte. Yeroo sana bulchaa kutaa biyyaatti kan ture mootichi hamaan Ileeskiindiriyoos jedhamu isaan argate. Mootichis baqattoota kana ofitti waamuun waa’ee amantii isaanii gafate. Iyyeluxaanis “yaa mootii xaa’ota waaqessun gaarii ta’uufi ta’uu dhiisuu isaa daa’imti waggaa sadii ni jiraatii isa gaafadh” jechuun deebisteef. Daa’imtichis bakka jiru akka dhufu taasifame, mootichis ‘’ yaa mucaa gammadaa akkam jirta jechuun gaafate, daa’imtichis eyyeen anaaf gammachuun naaf eegameera, siif garuu gaddaafi ilkaan walitti riguutu sii eeggata’’ jechuun deebiseef. Waaqayyo daa’ima kana irraa ayyaana isaa bulcheeraatii mootichaafi ergamtoota isaas ni rifachise, xaa’otaa sanaas ni abaare. Isaanis cimina daa’imtichaa arguun aja’iibsifatan.
Mootichis qaana’uun ”okkotee sibiilatti wantoota danfun baay’ee nama gubu danda’an kanneen akka Gagaa(ሰም), Ashaboo, Baruuda(ባሩድ), Muccaa (ሙጫ), adaamii, kkf naquun naaf dhiyeessaa” jechuun hojjettota isaa ajaje. Hojjettotni Ileeskindiriyoosis akkuma ajajaman erga taasisanii booda, “wanta ajajamne hunda raawwanneerra, bishaanis danfeera, sagaleen isaas akka qaqawweessa gannaa ni iyya, laboobni isaas akka halallaa nama waada; bishaan isaas heddu danfuu isaa irra kan ka’e ciqilee 14 ol utaala, egaa waan keessatti darbatamuu/gataman/ ajaji” jechuun gaafatan.
Sababa kiristaanummaa isaaniif qofa kan hidhamanii turan qulqullichi Qiirqoosifi haati isaa Iyyeluxaan “danfaa kanatti akka gatamaniif, hiikaa fidaa” jechuun mootichi isaan ajaje. Bishaan danfaa keessatti gatamuun yeroo afeelaman akka ilaalaniifi, warra abiddichaan gubatan ilaaluun akka sodaataniifis /amantaa kiristaanummaa akka jibbaniifis/ namootni hedduun waamamanii turan.
Yeroo kana qulqulleettiin Iyyeluxaan sagalee danfaa bishaani yeroo dhageessufi yoo argitu ni rifatte; kabaja isaaniif qophaa’e gonfachufis ni sodaatte. Mucaan ishee Qulqullichi Qiirqoos garuu ayyaannii Afuura Qulqulluu isa guutee akka duubatti hin deebineefis isa ciimsee, isa jajjabesse.
Haadha isaatiinis “Yaa hadhaa koo okkotee sibilaafi bishaan danfaa kana ilaaltee hin sodaatiin, hin dhiphatiin; Waaqni Anaaniyaa, Azaariyaafi Misaa’eeliin abidda boba’u keessaa isaan basee nuu walii jira ,nuunis bishaan danfaa kana keessaa nu oolcha” (Dan 3:1-30) jechuun jajjebesse. Haadha koo rakkoofi gadadoo addunyaa darbu kana irraa hafuuf jecha abidda bara baraatti gubachuu filattaa? Kun sitti haa hafu; amma Waaqayyo nu waliin jiraatii nu gargaara. Sosinnaa barsiisota sobdootaa (K. Sosi 1:12), Dani’eeliin afaan leencaa keessaa kan baase (Dan.6:22) Waaqayyo bishaan danfaa kana keessaa nu baasa” jedheen. Garuu haati isaa gorsa mucaa ishee ,kan ishee obsisiisufi cimsu waan hin dandeenyeef, Qulqullichi Qiirqoos ija isa gara saamiitti ol kaasuun ”yaa Waaqayyo gooftaa, garbittii kee dhala kee keessaa kan footu yoo ta’e anaanis kitaaba kee keessaa na haqi. Hundee [haadha] gubdee firii [ilma] eebbisuu feetaa? Kana taasisuuf arjummaan kee si dhorka. Jirma isaa muraa gubaa, baala isaa qofaa hambisaa hin jettu, ati gaarii waan taateef baala isaas hundee isaa waliin eegaa jetta. Yaa Gooftaa Diyaabiloos ‘warreen abbaa aangoo irraa ani jabaadha; qulqulloota kee mo’adhe; dallaa kee keessaa hoolaa tokko fudhadhee’ jechuun akka of hin jajneef haadha koof obsa, dandeettiifi humna Afuura Qulqulluu kee kenni”, jechuun kadhatee. Yeroo kana Diyaabiloos Iyyeluxaa biraa battalumatti bade. Kana booda Iyyeluxaanis “mootummaa Waaqayyoof abbaa kan naaf taatee, yaa mucaa koo ati kanaan booda abbaa kooti, anis mucaa keeti, guyyaan ati dhalattee kan eebifamtedha’’ jetteen. “Waaqni kee humna naaf kenneera; Qabsuura nurraa eegamu taasifnee moo’icha haa gonfannu. Kunoo okkotee sibilaa keessatti bishaan danfu yoon argu bishaan qabbanaa’aa ta’ee natti mul’ateera” jetteen.
Qulqullootni lamaan kunis bishaan danfaa keessaatti darbataman. Battaluma sana hangafni ergamootaa Qulqulluu Gaabri’eelin samii irraa ergamuun bishaan danfaa fannoo Kiristoosiin mallatteessuun qorrisiiseera; labooba ibiddaas dhaamseera. Wareegamtotni kunis osoo hin gubatiin, bishaan danfaa keessaa eegumsa Waaqayyoofi gargaarsa ergamtichaan bahaniiru. Eergamtootni Waaqayyoo yeroo gaddaa, gammachuu, dhiphinaa, sodaa, warreen isaan sodaatan cina ni buufatu, (Farsaa 33/4:7 Ho.Duk 5:19; 12:11) badii keenyaaf Waaqayyoon dhifama nuuf kadhatu (Luq 1:19, Xoob. 12:15).
Gooftaan akkuma mooticha Daawit irra bulee dubbate gochaan isaa raajii dha. Warrootni hamoon yoo mataa isaani ol ol qaban illee harki araara isaa bal’aa waan ta’eef abiddaafi bishaan danfaa, rakkoofi gidiraa gidduu nu dabarsa (Far 65/6:12), lafa onaa irraa gara lafa boqonnaatti nu baasa. Abbootiin kenyaa kanaaf “Waaqayyoon tiksee kooti, kan na dhabsiisu hin jiru” jechuun kan dubbatan (Far 22/3:1-6). Kanaafuu nuyis jaalala Kiristoosiifi amantaa keenyatti cimuu qabna. Ifni addunyaa Qulqullichi Phaawuloos “jaalala Kiristoos irra kan adda na baasu maali?” (Room 8:36) akkuma jedhe, yeroo tasgabbiis ta’e yeroo dhiphinaa amantii keenyatti cimuu jaalala Waaqayyoof qabnus jireenyaa qabatamaan ibsuun hunda keenya irraa eegama (2Ximo 4:2).
Walumaa galatti yaadannoo kabaja ayyaana kana yeroo taasifnu, salphumatti qulqulloota wareegamtoota kana irraa wantoota gurguddoo sadii hubanna. Kunis:
Hanga dhumaatii amantaa keenyaan cimuu akka qabnu;
Waaqayyoon warreen isaan abdataniitti dhiyoo, kan isaan hin leyasiifne (Far 25:3), fi Waaqni waaqessinu Waaqa fayyisuufi abiddaafi bishaan keessaallee nu baasee gara boqonnaatti kan nu ceesisu ta’uu; fi
Ergamootni qulqullootni yeroo maraa akka nuuf dhaabbatan, fayyina akka argannuf akka nuuf ergaman ni hubanna.
Nuyi kiristaanotni amantaa keenyaan cimnee, hojii gaarii hojjennee akkuma Qulqulloota Qiirqosiifi Iyyeluxaa ragaa baanee, addunyaa hamaa kana irraa fagannee, gaarummaa Waaqayyoo, kadhannaa Ergamootaa, araarsummaa haadha keenya Dubroo Maariyaamitti amannee, gaabbii gallee, kabajamaa fooniifi qulqulluu dhiiga Gooftaa fudhannee dhaaltota mootummaa Isaa akka taanuuf Waaqayyoo nu haa gargaru.
Eegumsi hangafa Ergamoota Qulqullu Gabri’eelii, wareegamticha Qulqulluu Qiirqoosifi hadhaa isaa Qulqullettii Iyyeluxaa nuu waliin haa ta’uu.
v Sinkisaara ji’a Adooleessa, Guyyaa 19.
v Dirsaana Q/Gabri’eelii
v Weebsaayitti Waldaa qulqullota fuula Amaariffaafi Barruulee Hamer
YEROO GANNAA (ዘመነ ክረምት)
July 20, 2016 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
YEROO GANNAA (ዘመነክረምት)
Yeroo gannaa jechuun yeroo bishaanii jechuu dha. Sababni isaas bishaan yeroo kana keessatti ol’aantummaa waan argatuufidha. Bishaan guyyaa Dilbata(Sanbata guddaa )kan uumame yammuu ta’u,iddoofi daangaadhaan kan murta’e garuu guyyaa Wiixataati. Daangeeffamni isaas bakka afuritti kan murtaa’edha.
Bishaan inni jalqabaa dachee gaditti qilleensa malee kan dachee baate isa jiru dha.
Bishaan inni lammaffaa naannoo addunyaa naageebi (ናጌብ) fi Admaas gidduutti heemooti fi Leewaatiin (ሔሞትእናሌዎታን) marsamee kan jiruu fi Galaana (ዉቅያኖስ) jedhamuudhaan kan waamamudha. Qaamni bishaan kanaa Biiftuun yammuu baatuufi galtu ifni ishee waan irratti bahuuf balaqisni galgalaafi ganamaa addunyaa kana irratti guutee argama. Sababa duumessaatiiniis gara samiitti ol ba’ee erga bittinnaa’een booda gara garaa dachee keessa seena.
Bishaan inni sadaffaa addunyaa kana keessatti laga burqituu kan ta’e uumamtoota hundaa kan gargaaru, namootaafi horii dheebuu kan baasu,biqiltoota, kuduraafi muduraaf kan ta’u, fedhii nyaataa kan bakka ga’u, walumaagala uumamtoota hundaa kan tajaajilu qabeenya hundaa kan ta’e hiyyeessis sooressiis wal -qixaan kan itti fayyadamaa jiru dha. Samii (ጠፈር)kan inni hojjetame bishaan irraa waan ta’eef, ho’ina aduu irraa kan ka’e akka hin diigamneef qileensa irratti bishaan haanoos (ሐኖስ) jedhamu gubbaa isaa irratti akka ta’u ta’eera.
Bishaan inni arfaffaa samii ool kan jiru Haanoose kan jedhamu bishaan daangeeffame jechuudhaan kitaabni Aksimaaroos (አክሲማሮስ) ni ibsa.
Ganna jechuun turtii yammuu ta’u lakkoofsa yerootifiis ni gargaara. Fakkeenyaaf iddoo tokko tokkootti ganna meeqa turte jechuudhaan yeroo turtii isaanii addaan baafatu. Hiikaan isaas yeroo bokkaa,duumessaa,biqilaa,sagalee Bakakkaan kan itti dhaga’amu, lagni (galaanni ) kan itti guutu kan goge kan itti margu jechuudha. Yeroo kanatti bal’inaan barumsi kennamu argamsiisaafi argama uumamaa ,waa’ee nyaataa fi jireenya bal’inaan kan dubbatamu waan ta’eef Uumaafi Uumamaa ,barsiisaa fi barataa, dhiyoofi fagoo adda baase kan nama agarsiisuufi kan dhunfaa ofiis ta’e kabaja eenyummaa nama kaanii kan itti baranuudha. Yeroon kun yeroo
gannaa jedhamee waamamus of keessatti kutaalee adda addaa waan qabuuf bal’inaan ilaaluudhaaf akka nutti tolutti yeroo gannaa bakka sadiitti qoodna.
v Galma gannaa
v Gidduu galeessa gannaa
v Dhumata gannaa
Galma Gannaa (በዐተ ክረምት ) :Galma gannaa jechuun kan beekamu Waxabajjii 26 kaase hanga Adoolessa 19 gidduu guyyoottan jirani guyyaa 23 dha.Yeroo ykn waxabajji 26 hanga Adooleessa 19 tti lafti qonnaan qootame kan qopha’e waan ta’ef sanyiin ni faca’a , kan faca’es kan itti biqilu, ho’ina aduu irraa kan ka’e mukeen googani hundi baala baafachuu kan itti jalqabanidha. Kutaa itti aanutti yeroo kana keessatti barreeffamoota Kitaaba Qulqulluufi kitaabota kaanirras dubbisuudhaan kan dhiyeessinu ta’a.
Ganna kana keessatti roobni roobu kan eebbaa ,kan nagaa, sanyii facaasame kan biqilchu akka nuuf ta’u horiin kan itti furdatu akka nuf ta’u Eeyyama Waaqayyoo nuf haa ta’u ,araarsummaan giifti keenya Dubroo Maariyaamii nu irraa hin fagaatiin. Ameen!!!
Wareegamtoota Amma du’aatti kan amanamte ta’i mul.yoh.2:10
July 12, 2016 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Amma du’aatti kan amanamte ta’i mul.yoh.2:10
Wareegamtoota jechuun kan ragaa bahan,waa’ee amantaa isaanii dhugaa bahanii wareegamummaan kan du’an jechuu dha. Kanaaf Qulqulloonni Wareegamtoonni waa’ee Waaqa isaaniif dhugaa baatuu ta’anii kallattii adda addaan rakkoo isaanitti dhufu hunduma danda’anii maqaa kana argachuu danda’aniiru. Isaanis Waaqa isaanii abdii godhatanii mo’icha argachuu danda’aniiru. Amma du’aatti waan amanamaniif Waaqa isaanii biraa gonfoo jireenyaa argatani. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos mul’ata Yohaannis kana irratti “hanga du’aatti kan amanamte ta’i, ani gonfoo jireenyaan siif kenna” jedhe. Kanaaf amma du’aatti warra amanamaniif gonfoo jireenyaa laateefii.
Qulqulluun Phaawuloos “ Waa’ee keetiif guyyaa hundumaa ni ajjeefamna; akka hoolota qalamaniitti lakkaa’amne,kana hundumaa garuu Isa nu jaalateen mo’attootarra ni caalla” Jechuun ibseera (Rom.8:36). Kanaaf Waaqayyo waan isaan jaallateef, Isaanis jireenya isaanii guutuu Waaqayyoon waan jaallataniif mo’icha argatani. Kana jechuun Waaqayyo kan isaaniiti, Isaanis kan Waaqayyooti. Waaqayyo immoo kan Isaa kan ta’e ni eega,ni tiksa. Isaa 43:1-3: “yaa Isiraa’el kan si tolche Waaqayyo akkana jedha,bilisa si baaseera hin sodaatiin,maqaa keenis si waameera ati kan kooti,yammuu ati bishaan keessa ceetus bishaan si fudhatee hin badu;abidda keessa yommuu darbitu hin gubattu, laboobni ibiddaas si hin qabatu” jedha. Waan kana ta’eef rakkoo diinni qopheessuun Wareegamtootni lubbuudhaan homa tokko illee hin miidhaman.
Wareegamtootni jireenya isaanii hundumtuu dhugaan kan guutame dha. Dhugaan immoo amma dhumaatti ni dhaabbata. Fakk 12:19 : “Arrabni dhugaan amma bara baraatti ni dhaabbatti,arrabni sobduu garuu amma libsuu ijaati” jedha. Waan kana ta’eef Wareegamtootni Qulqulloonnis Waaqa dhugaaf dhugaa bahanii gonfoo jireenyaaf gahaniiru. Kennaa Waaqa Isaanii biraa argatan bira ga’uuf fooniin rakkoon akka isaan mudatu beeku. “Dhugumatti Iyyasuus Kiristoosiin,Waaqayyoon fakkaatanii jiraachuu warri fedhan hundumtuu ni ari’atamu. Garuu namoonni hamoonnifi dogoggorsitoonni ofii dogoggoraafi namoota kaanis dogoggorsaa hammeenya isaaniitti caalaa deemu. Ati garuu isa baratteefi hubattetti ciminaan jiraadhu; eenyu fa’i irraa akka baratte waan beektuuf.”2xim 3:12. Egaa bara keessa jirru kana yeroo namoonni waan baratanifi hubatan dagatanii dogoggoraan fudhatamaa jiru waan ta’eef waan baranneef hubanneen jiraachuutu nurraa eegama.
Karaa biraa Abbaan keenya Qulqulluun Efreem galata Dubroo Maariyaamii kan guyyaa Kamisaa keeyyata 6ffaa irratti “Wareegamtootni dhugumatti waa’ee Mootummaa Waaqayyoof jedhanii mi’aawaa biyya lafaa ni tuffatani; du’a hadhaawaas ni obsani” jedha. Kanaaf Wareegamtootni fooniin yoo du’aniyyuu lubbuun bara baraaf akka jiraatan waan beekaniif hundumaa obsaan dabarsaniiru. “Karaa hundumaa ni dhibbatamna,garuu hin dhiphannu;ni ceeqamna,garuu abdii hin kutannu. Ni ari’atamna,garuu hin gatamnu;lafaan dha’amna (kuffifamna), garuu achumatti hin hafnu. Iyyasuus jiraataa ta’uun Isaa nurratti akka mul’atuuf,yeroo hundumaa du’a Iyyasuus dhagna keenyatti baannee ni adeemna.” Jechuun Qulqullichi ni dubbata (2Qor 4:8-10). Nutis har’a daandii Qulqullootarra adeemnee eebba isaan argatan argachuuf bu’aa biyya lafaa ilaaluu dhiisnee jireenya mootummaa Waaqayyoo ilaallee jabaachuu qabna. “Ol kan jiru yaadaa malee lafarra kan jiru miti” akkuma jedhame (Qola.3:2)
Egaa kana hundumaa goonee, karaa Wareegamtoota Qulqullootaa irra deemnee amma dhumaatti warra amanaman akka taanuuf arjummaan Waaqa keenyaa,kadhannaan Dubroo Maariyaamii,Eegumsi ergamootaa,kadhannaan Qulqullootaa nu haa gargaaru. Ameen!!!
Sooma Duuka Bu’ootaa
June 24, 2016 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Dn Takluu Haayiluun
Soomii jechuun dhisuu, of dhorkuu, lagachuu, fedha foonii fedha lubbuuf bichisiisuu jechuu dha. Soomiin bara Kaakuu Moofaa irraa kaasee hangaa ammaati kan jiru, gara fulduraattis kan itti fufu dha. Raajootni Waaqayyoti kan dhiyaatan (Kessa Deebii 34:28), badii cuubuu jalaa kan ittin ba’amuu (R.Yona 3:5-10), Diinni kan ittiin mo’aamu (Maat 4:21; 17:21), tajaajilaaf kan qophoofnu (Yoha 13:3;4:25), kabajaa kan argannu (Duuka 10:20) ….Soomani. Soomiin wanta eegneefi kadhanne qofaa kan ittin argannuu osoo hin ta’iin wanta nu barbaachisu maraa kan ittin argannu dha.
Bakka amantaan jiruti yeroo hedduu soomiin ni jira. Mannii amantaa Ortodoks Tewaahidoo Itiyoophiyaas sooma mataa ishee yeroofi waqtii garaagaraatti addaan qooddee ni qabdi (Zak 8:19). Soomiin Duuka bu’ootas gosa sooma labsii keessa isa tokko ta’ee soomota akka seera manaa qulqullumaatti yeroo maraa Wiixata eegalan sadeen (Soomii Gooftaa, Sooma Saba Nanawwee, fi Sooma Dukaa bu’otaa) keessaa isa tokko.
Soomiin kun lakkofsaan guyyaa murtaa’aa hin qabu. Haa ta’uu malee soomiin kun akka mana kiristaanaa Ortodoksii Itiyoophiyaatii waggaa waggaan ayyana guyyaa shantamaaffa /Pharaqiliixoos/ bulee akka soomamuufi yeroo hundaa Adolessaa 05 akka hiikamu /xumuramu/ seerri mana amantaa ibsa. (Fitihaa Nagastii Keyyataa 15 key. Xiqaa 569).
Soomiin kun Amantoota duraanii biratti sooma Loltoota jedhamuun beekama. Bara durii loltoonii dirree waraanaa deemuuf ykn si’a dirree waraanaa irraa deebi’an dogogora dalaganiif ni soomu ture. Duuka buutotni Gooftaas Lallaba wangeelaaf dirree waraanaa hamaa kan taate addunyaa kana irraa deddebi’uun barsisuun, seexana baasuun, namoota barsiisuun cuuphuun hordoftoota Kiristoos taasisuun isaaniin dura sababa soomaniif soomii loltootaa jedhama.
Soomiin Duuka bu’ootaa sooma kaan irra adda kan isa taasisu Gooftaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos afaan Isaatiin raajii dubbachuufi isaatini. Kunis yeroo Gooftaan keenya biyya lafarra deddeebi’ee barsiisutti warreen Farisoota itti dhiyaachuun ‘’Duuka bu’ootni Yoohaannis maaliif heddu soomuu kadhannaas maalifiin taasisuu, Duuka buutotnii kee garuu kan hin soomnee maalif?‘’ jechuun yeroo gaafatanitti, Gooftaan akkas jedhee deebbiseef “Miinzootni osoo misirroon isaan waliin jiruu gadduun isaan barbaachisaa? Garuu yeroo misirroon isaan irraa adda ba’uu ni dhufaatii waqtii sana ni soomuuu”. Huccuu haarawaa irratii kan moofaa erbu hin jiru, erbaan isaa uffata tarsaasatti, tarsa’uun isaas kan caalu ta’a. Okkotee moofaatti daadhii waynii harawaa kan naqus hin jiru, osoo naqame garuu okkotee /gaanii/ san ni cabsa. Daadhiin Wayniin suniis ni dhangala’a. Okkoteen sunis ni bada. Garuu daadhii waynii harawaa okkotee harawwatti naqu, lamaanuu achiin wal eeguu. (Maat 9:14-17 Luqa. 5:33-39)
Barruu kana keesssatti Gooftaan keenya “yeroo misirroon isaan irraa addaan ba’u ni dhufaatii waqtii san ni soomuuu” kan jedhee kuni raajii waa’ee sooma kanaaf dubbatame dha. Akkasumas jechi kun sooma kanaaf beellama kenna. Kunis misirroon yeroo irra addan bahuu jechuun ibsamee. Kanaafuu, soomiin Dukka bu’ootaas Ol bahuu Gooftaan /በዓለዕርገት/ booda malee hin eegalu. Kunis mannii amantaa Ortodoksii gocha ishee kamiifuu hagam Kitaaba Qulqulluu irratti akka hundooftu mul’isa.
Soomiin kun ayyaana Ol-bahuu /ዕርገት/ irraa guyyaa kudhan /10/ booda eegalama. Kunis qaamni Dukaa bu’ootaa hangaa Afura Qulqulluun isaaniif bu’utti guutummaa guutuutti qophaa’aa ta’uu dhiisuu isaa nuuf mirkaneessa. Kanas Gooftaan keenya “erbaa moofaa ……” akkasumas “okkotee moofaa …..” jechuun ibseera.
Haaluma kanaan Duukaa buu’otni jajjabeessaa kan ta’e Afuura Qulqulluun erga haaromsamanii booda akka sooman ni arganna. Kutaa dubbii barumsaa Gooftaa waa’ee sooma Duukaa bu’ootaaf barreeffame keessatti dubbii ijoo sadii arganna. Mee isaanin gabaabumatti haa ilaalu.
1.“Miinzootni osoo Misirroon isaa waliin jiru gadduun isaanirraa hin eegamu.” Miinzoota kan jedhaman kanneen akka Yohaannis Cuuphaa warreen “gaabbii galaa” jechuun daandii qulqulleessan, warreen wangeela barsiisanifi namoota daandii Kiristoositti fidani dha. Hojiin miinzotaa misirree dubra gara misirrootti fiduu waan ta’eef haaluma kanaan miinzoota jechuun Duuka buu’oota jechuu dha. Iyyesuus Kiristoos misirroo (dhiiraa) yoo ta’uu manni qulqullummaa (kiristaanootni) immoo misirree (dubra) fakkeefamu (2Qor 11:2, Yoh 3:29). Kanaafuu, miinzootni misirroo gammachisuuf jecha rakkoo kamiyyuu ciiniinnachuun dabarsu malee fuula misirrootti hin gaddani. Soomni barbachisaa ta’u iyyuu Gooftaan osoo isaan waliin jiruu akka soomuu hin qabne nu hubachiisa. Gaafa inni isaan irra adda bahe garuu (Jimaata gaafa warra Ayihuudotaan fannifamee irraa hanga Dilbata du’aa ka’umsa isaa arganitti fi erga inni gara saamiitti olbahee) booda akka soomuu qaban nu agarsiisa. Fakkeenya kana keessatti soomiin gaddaan fakkeessameera. Soomuun gammachuun isaa lubbuudhafi malee fooniif miti. Foon hanga sooma barutti soomni adabbii isaati. Kanaafuu soomaan lubbuu malee foon hin gammadu. Sababa kanaaf soomiin Kitaaba Qulqulluu keessatti bakka heddutti gadda, rakkoo, booyicha waliin walqabatee dhiyaata. (Iyuu’eel 2:12)
2.“Huccuu harawaa irratti kan moofaa haguuguu /erbuu/ hin jiru, erbaan isaa uffata tarsaasaatti, tarsa’un isaas kan caalu ta’a.” Namni huccuu hodhu uffata harawaa irratti huccuu moofaa hin erbu. Kunis huccuu balleessuufi midhagina isaa dhabsiisuu ta’a. Inni harawaan sanis sababa isa moofaatti dafee gatama. Fakkenya kana keessatti ogessaa huccuu hodhuun kan fakkefame Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosi dha. Huccuu erbaan kan fakeffamee sooma Kakuu Haaraa Gooftaan hundeesse yoo ta’u, huccuu moofan kan fakkeefame jireenya Duuka bu’ootaati. Akkuma fakkenya kana irra hubannutti namootni uffata Gooftaati. “አልባሲሁሰለክርስቶስመሃይምናንእሙንቱ” (“Uffatni kiristoos amantoota) akkuma jedhu. Kiristaanotni huccuu Kiristoos yoo jennu kabaja Waaqayyo ni muldhisu jechuu keenya. Kunis uffatni kabaja namaa sababa muldhisuuf.
Gama biraan, Kiristoos namootaaf huccuu isaaniitti “Isin warreen Cuuphamtan Kiristoosin ufattaniitu” akkuma jedhu qulqullichi Phaawuloos (Gala.3:27). Kiristoos immoo uffata amantootatii yoo jennu fayyaa, midhagina, golgaa badii fi kabaja isaaniiti jechuu keenya.
Sooma kana keessatti erbaan fakkeefamuun isaa erbaan wanta wal dhabee fi wal irra fagaatte akkuma wal-qunnamsiisu, soomiinis fedha garaa garaa kan qaban fooniifi lubbuu tokko waan taasisuufi (walitti fiduufi) dha.
Huccuu haarawwaa irratti kan moofaa erbuun hin jiru, dacha’an/erbaan/ isaa uffata tarsaasaatti, tarsa’uun isaas kan caaluu ta’a jechuun Iyyesuus kiristoos qaamni duuka bu’oota cubbuun osoo dadhabee /mofa’ee/ jiruu osoo isaan hin jajjabeessiin/hin haroomsiin/ seera haarawaa tolchee ykn sooma sooma jedhee akka isaan hin ajajnee fi qaamni isaanii yeroo Afuura Qulqulluun haromsamu garuu akka soomuu qaban muldhisa. Kunis waaqayyo dandeetti keenya malee ba’aa akka nutti hin feene fi abbaa gaarii nu caalaa nuuf yaadu ta’uu isaa agarsiisa. Innis yeroo sana Duuka bu’ooni waan gochuu hin dandeenye taasisa jedhees isaan hin ajajne, yoom akka ajaju ni beekaati. Isiraa’elootaaf osoo garbummaan jiraanii ajaja kurnan kan hin kennineef kanaafi. Garbummaan osoo jiranii waan barbaadan dalaguun waan hin danda’amneef. Waaqayyos dhala namaa hanga humna isaa malee humnaan isatti olitti ba’aa itti hin fe’u. Nuyis akkuma isa irraa baranneen gochuu kan qabnu haaluma kana dha.
3.‘’Okkotee moofaatti waynii harawaa kan naqu hin jiru, osoo naqamee garuu okkotee /gaaniin/ sun ni caba. Daadhiin Waynii sunis ni dhangala’a. Okkoteen sanis ni bada. Garuu daadhii waynii harawaa okkotee harawwatti naquu, lamaanuu achiin wal eegu.’’ Okkotee moofaan kan fakkeefame jireenya Duuka bu’ootni osoo Afuura Qulqulluu hin argatiin turan, daadhii waynii haarawwan immoo sooma Gooftaan wangeelan bu’uuresseen fakkeefama. Daadhii waynii haarawaa kan naqnu okkotee haarawaatti akkuma ta’e sooma Kakuu Haarawwaa ishee jalqabaa Duuka bu’ootni soomuu kan qaban erga Afuura Qulqulluu fudhatanii ta’uu isaa hubanna. Cimina afuuraan (lubbuun) foon keenya ceephaana: “jilbi koo soomaan dadhabe, qaamni koos dhadhaa dhabee huuqqate” Far 108:24, akkuma jedhe qulqulichii Daawitti.
Egaa namootni heddun sooma bu’uura Kitaaba Qulqulluu akkanattii qabu kana ‘’kun kan warreen lubootaati, kan warren jaarsotaati, Dur hin turre kan dhiyoo dhufe’’ jechuun dogoggoranii namoota biroos ni dogoggorsu. Soomuu dhiisuuf sababa barbaaduu irra sababa barbaadanii soomuutu gatii guddaa qaba. “Hiyyeessi hiyyummaan isaa iyyuu sooma, Itiyoophiyaa keessa jiraachuun ofumaafu soomii dha” akkaa jedhan Waaqayyo irratti baacuun adabbii cimaa fida. “Kun soomii lubootaafi jaarsoolii ti” yoo jennu immoo sooma barsiisuun lubootafi jaarsoolii qofaaf akka ta’e; akkasumas fayyinni kan barbaachisu, cubbuu kan dalagu isaan qofa jechuu keenya.
Duuka buu’otni akkuma ajajamaniin addunyaa kana deemanii barsiisuu isaanin dura jalqaba sooma soomani. Duuka bu’ootni hin soomne jechuun fakkenyii armaan oliitti Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos dubbatte soba jechuu dha. Galannii Waaqayyoof haa ta’uuti jechi Waaqayyoos rawwateera duuka bu’ootniis isaas soomaniiru.
Walumaagalatti, ergaa guddaan sooma kanaa Duuka butootni Gooftaa irraa kennaa Afuura Qulqulluu akkuma fudhataniin jireenya isaanii soomaanfi tajaajiilaan Waaqa isaaniif kennaniiru; tajaajilaaf ba’uun dursas jireenya isaanii soomaan eegalaniiru. Kanaafuu nuti kiristaanonnis tajaajila Afuuraa hundaa dursa jireenya keenya maraa Waaqayyoof kennu akka qabnu nu barsiisa. Nutis soomii kana soomnee cubbuu irra kan hafe wantii yaadnufi hojjetnu maraa akka nu raawwatamu sugni Duuka buu’otaa, gargaarsi Ergamootaa, araarsummaan hadha keenya dubroo Maariyaam, kadhannaan Qulqullootaa, arjummaan Waaqayyoo nu waliin haa ta’u.
v Waangelaa Maatiwoos dubbisaa fi hiikaa isaa
v Website waldaa qulquulotaa Amaariffaa
v Fitihaa Negestii
June 17, 2016 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Dn katamaa Taganuun
Ayyaanoota Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isaan gurguddoo salgan keessaa ayyaanni Pharaaqliixoos isa tokkodha.Ayyaanni Pharaaqliixoos du’aa ka’umsa isaan booda gaafa guyyaa shantamaffaa ni kabajama. Akkuma beekamu yeroon ayyaanni du’aa ka’umsi Gooftaa kan dhumatu guyyaa kanatti. Pharaaqliixoos Qaama sadan keessaa isa tokko kan ta’e itti waamama maqaa Afuura Qulqulluuti. Hiikaan isaas kan nama jabeessu, nama birakan dhaabbatu ,kan gargaaru ,jechuudha.
Warrootni Ayihuud wagga waggaan ayyaanoota kabajan keessa inni tokko Ayyaana Asheetaa (በዓለሰዊት)ture. Biyyoota hunda keessatti kan bittina’aniifi biyya keessas kan jirani warrootni Ayihuud ayyaana faasikaa ayyaanefachuudhaaf erga sassaabamaniin booda guyyoottan shantamaaf godoo ijaarrachuudhaan hoolaa qalatanii magaala Iyyaruusaaleem keessatti ayyana faasikaa nikabaju turani. Guyyaa shantamaffaatti xumura ayyaana isaanii raawwatanii gara biyya dhufanitti deeb’iu. Guyyaan kun warroottan Ayihuud biratti qooqa Giriikiin” Phanxe Qosxe “/Guyyaa shantamaffaa jedhame waamama.
Akkuma Warrootni Ayihuud guyyaa shantamaffaa biyya garaa garaa irraa dhufanii kabajani, Duukaa bu’oottoonni Gooftaas du’a barbadeessee erga du’aa ka’en booda gaafa guyyaa afurtamaa gara samiitti ol ba’uuf yennaa qophaa’etti dursee barattoota isaatiif “samii irraa humna hanga uffattanitti Iyyaruusaaleem keessa tuuraa” jechuudhaan akkaataa ajajeen guyyaa sanaa jalqabanii Waaqayyo galateeffachaa , eebbisaa Mana Qulqullina keessa jiraatani .Luq.24;49-53
Barattoonni isaas laphe tokko ta’uun mana haadha Maarqos “Tsirha-Tsiyoon” jedhamtee waamamtu keessatti sassaaabamanii osoo jiranii gaafa guyyaa shantamaffaa qileensa isa guddaa kan fakkaatu sagaleen samii irraa dhufe. Manni isaan keessa turanis Afuuraan ni guutame. Boba’a ibiddaa fakkaachuudhaanis tokko tokko isaaniirra qubate. Dursee akka kun ta’u “isin garuu guyyaa muraasaan booda Afuura Qulqulluutiin ni cuuphamtu” jechuun kan barreeffame gaafa Afuurri Qulqulluu isaanirra bule raawwatame .Hoj.Erg.1;5
Afuurri Qulqulluu Isaan irra erga buleen booda wanti raawwatame:
Qooqa haaraa dubbachuu :Osoo Afuurri Qulqulluu isaan irra hin buliin qooqni isaan beekani ykn duubatani Ibraayisxi qofa ture. Erga Afuurri Qulqulluu irra buleen booda garuu qooqa 71 dabalameef qooqa 72 addunyaa keessa jiran hundaan dubbatan (kitaabni ወተናገሩበነገረኩሉበሐውርት akkuma jedhu). Qooqa yennaa jennu kan abbaa qabu ,kan hawaasni itti fayyadamu kan beekamu ta’u qaba. Hoj.Erg.2;7. Bara ammaa keessa jirru kanatti garuu qooqaan dubbanna jechuudhaan qooqa hin beekamne ,qooqa abbaa hinqabne ,hiikkaa kan hinqabne dubbachuudhaan adeemsa faallaa kan calaqqisiisan mul’ataniru. Kuni garuu dhugaa Kitaaba Qulqulluu irratti ibsame waliin wal-hin simu!
Guyyaa Dhalachuu Mana kiristaanaa: Hangafichi Beekaan Mana Kiristaanaa Qulqulluu Yohaannis Afaan Warqee guyyaan kun “Guyyaa dhalachuu Mana Kiristaana”jechuun waameera. Sababni isaas Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhiiga isaatiin mana isaa kan hundeesse ta’us, Yaa’iin maatii 120 hunda’us , Mana Kiristaana kan bilisoomsu ,kan jabeessu, kan qulqulleessu ,kan eegu Afuurri Qulqulluu samii irraa hin buune ture . Yaa’iin amantootaas hin hundeeffamne ture, gaafa guyyaa shantamaa garuu Afuurri Qulqulluu samii irraa barattoota isaatiif yennaa bu’u Qulqulluu Pheexroos warra ayyaana kabajuuf sassaabamani gidduutii ba’ee Wangeela isaaniif lallabe battaluma sanaan baay’inni isaanii 3000 kan ta’e Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositti amanani, Qalbii isaaniis jijjiratani, sanaan boodas ni cuubamani . Kana ta’u isaatiiniis Manni Kiristaanaa Yaa’iin amantoota Iyyaruusaaleem keessatti yeroo jalqabaaf hundeeffamte. Kanaafidha egaa Guyyaa Dhaloota Mana Kiristaanaa kan jennu.
Farfannaan Guyyaa Kana Faarffatamu : Afuurri Qulqulluu ni bu’e ( ወረደመንፈስቅዱስ) kan jedhamu dha.
Dubbisa Wangeela Guyyichaa
Þ 1 Yoh.2;1-18
Þ Hoj.Erg. 2;1-18
Misbaakii Guyyichaa (የእለቱምስባክ) Faarsa Daawit 67፤18
ዐረገውስተአርያምፄዊወከፄዋ = Samiitti ol-baate, boojiis ni boojite
ወወሀብከጸጋከለዕጓለእመሕያው= Kennaakees dhala namaaf kennite
እስመይክህዱከመይኅድሩ= warreen siin ganan achi akka bulaniif
Wangeela Guyyichaa (የዕለቱወንጌል)
Þ Wangeela yohaannis 14፤1-22
Imaltoota Emaahus (Luq 24:13-35)
May 28, 2016 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos guyyaa du’aa ka’e sanatti duuka bu’oota Isaa keessaa Luqaas fi Qalawoopha kan jedhaman, Iyyerusaaleem irraa gara Emaahus deeman turan. Emaahus Iyyerusaaleem irraa boqannaa 60 fagaata ture. Jarris waan yeroo sana ta’e waa’ee Gooftaa Iyyesuus Kiristoos kan ta’e hunda haasawaa deemu turan. Yeroo kana Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyesuus Kiristoos isaan waliin adeema ture; ijji laphee isaanii garuu akka Isaa hin hubanne ittifamee ture. Innis “Otoo dadhabbiin deemaa jirtanuu kan haasoftan kun maali?” jedhee isaan gaafate. Isaaniis “Kan Iyyerusaaleemitti ta’e kana kan hin beekne ati biyya kanaaf keessumaa dhaa?” jedhaniin. Innis “Maali inni” jedheen. Isaanis deebisanii “Waa’ee Iyyesuus isa Naazireet kan Waaqayyoo fi namoota biratti angoo-qabeessa turee warri Lubootaafi angafootaa garuu dabarsanii du’aaf Isa kennan nuti garuu Isiraa’eeliin kan furu Isa jenne abdana ture; ammas kuni ega ta’ee har’i guyyaa sadaffaadha. Kana malees warra gara keenyaa keessaa dubartoonni ganama iddoo awwaalichaa dhaqanii raajii akka argan ni dubbatu, foon Isaas achi akka hin jirre akka du’aa ka’es ni dubbatu. Warra nuwaliin jiran keessaas dhaqanii akkuma dubartootni jedhan ka’uu Isaa akka baran dubbatu, nu’i garuu hin argine” jedhaniin. Gooftaaniis deebisee “Isin kan hin hubanne fi onneen/lapheen keessan kan hin amanne! Kiristoos kana hundumaa dhiphatee booda gara ulfina Isaa ni gala mitii?” jechuudhaan kitaabota Muusee fi Raajota keessatti waa’ee Kiristoos kan barreefaman hikee itti hime. Bakka deeman Eemaahus yeroo gahanis waan Inni fagoo deemu waan isaanitti fakkaateef aduun dhi’aa akka jirtu itti himuun akka isaan waliin bulu kadhatan. Innis isaan waliin gara mana isaanii seenee/lixee isaanuma waliinis taa’ee nyaata eebbisee yeroo kennuuf ijji laphee isaanii banamee Isa ta’uusaas baran. Innis isaan biraa ni dhabame. Isaan garuu isa Gooftaan amma gubbaa irraa humna argattanitti Iyyeruusaalemii hin ba’iinaa jedhe yaadachuun yeruma san gara Iyyerusaaleemitti deebi’an. Nutihoo imaltoota Eemaahus kana irraa maal baranna?
Imaltoonni kuni karaa yeroo deeman waa’ee Gooftaa keenya qoricha keenya Iyyesuus Kiristoos, dinqii fi raajii Inni hojjete, namoonni warri luboota Faarisotaa akkamitti akka Isa fannisanii ajjeesan, akka awwaallame, du’aas akka ka’e haasawaa fi wal-jajjabeessaa, mari’achaas deeman turan. Yeroo sana namoonni Gooftaa Iyyesuus Kiristoosiin waaqa dha jedhanii fudhatan hundi akka doorsifaman, miidhaman ykn ajjeeffaman ta’ee ture. Kunis luboota fi angafoota Faarisotaatiin kan labsame ture. Imaltoonni kun garuu sodaa fi qaanii tokko malee waa’ee Isaa haasa’u turan. Yeroo Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyesuus Kiristoos nama karaa deemu fakkaatee isaanitti makamu illee eenyummaa Isaa otoo hin beekiin ykn warra isaan miidhuu danda’aniifi mitii isaa otoo adda hin baafatiin wanta beekanii fi wanta dhugaa ta’e dubbataa turan.
Akkasuma nutis waa’ee fannoo fi du’aa ka’uu Goftaa keenyaa, waa’ee amantaa keenyaa, waa’ee Mana Kiristaanaa keenyaa, sodaa fi qaanii tokko malee dhugaa bahuu akka qabnu irraa barachuu qabna. Imaltoonni kuni waa’ee Gooftaa keenyaa waan haasawaa fi xiinxalaa deemaniif Gooftaa isaanii simachuu danda’aniiru. Otoo akkas hintaane ta’ee carraa Gooftaa simachuu hin argatan turan. Dabalataanis, imaltoota kanarraa wanti barannu amantaa keenyaaf dhimmamuu akka qabnuu dha. Waa’ee fannoo fi du’aa ka’uu Gooftaa wallaaluun imalaa sanaa isaaniif hin fudhatamu ture. Kanaafis “Wanta Iyyerusaaleemitti ta’e kana kan hin beekne ati keessummaadhaa?” jedhan. Kanaaf nutis akka Kiristaana tokkootti wanta Mana Kiristaanaa keessatti raawwatamu irratti keessummaa ta’uun nurraa hin eegamu, ga’ee keenya bahuutu nurraa eegama malee. Yeroo dadhabbii keessa jirru ykn yeroo qorumsa adda addaa keessa galle illee amantaa keenya dagachuu akka hin qabne nu hubachiisa.
Dhiibbaa namarra gahuu kamiyyu sodaachuun, qaaniidhaaf ykn faayidaa adda addaatiif jedhanii dhugaa dubbachuu dhabuun sirrii akka hin taane imaltoonni kun nubarsiisuu. Kunis dhugaa wanta ta’e ifa baasuun Waaqayyo fuulduratti kabaja guddaa akka nuuf argamsiisu Goftaan yeroo dubbatu “kan namoota fuulduratti dhugaa naaf bahe anis fuula Abbaa Koo Isa samii durattin dhugaa bahaaf, kan namoota fuulduratti ana gane garuu anis isa nan gana” jedhee dubbateera, Maat 10:32.
Abdii Keenya Waaqayyo Qofa Irratti Gochuu
Imaltootni kuni abdiin isaanii Gooftaa Iyyesuus Kiristoos qofa ta’uu isaa raga bahaniiru. Faayidaa adunyaa kanaa irra fayyina Gooftaa biraa argatan abdii godhatanii hanga Gooftaan fannifamutti akkasumas hanga du’aa ka’uu Isaatti turan. Dadhabbii fi hir’ina isaanii kan guutu Gooftaa ta’uu isaa otoo hin dagatin akkasumas otoo abdii hin kutin jiraachuu danda’aniiru. Gooftaan yeroo “Isin kan hin hubanne fi onneen/lapheen keessan kan hin amanne!” jedhuun dadhabbina isaanii fudhachuudhaan akka irra caalaa barumsaa fi amantii argatan onnee/laphee isaanii qopheessan. “Yaa Gooftaa akka waan baay’ee nutti himtu nu waliin gali” jedhanii kadhatan. Nutis abdiin keenya Isa qofa ta’uu amannee dadhabbina fi hir’ina amantii nuti qabnu akka Inni nuuf guutu onnee/laphee keenya banuudhaan barumsa Mana Kiristaanaa keenyaa dhaga’uu akkasumas Gooftaa keenya gara onnee/laphee keenyaatti galchuutuu nurraa eegama.
Imaltootni kuni akkuma Abraham abbaa isaanii keessumaa simachuutti ni gammadu turan. Kanaaf eenyummaa Isaa otoo hin bariin Gooftaadhaan nuwaliin galtu malee jedhanii kadhatan. Qulqulluu Phaawuloos keessummaa simachuun akka nurraa eegamu yeroo nutti himu “Keessummaa simachuu hin dagatinaa namoonni tokko tokko otoo hin beekiin Ergamoota Waaqayyoo illee simataniiru” nuun jedha, Ibr 13:1-2. Luqaas fi Qalayoophaanis ( ቀለዮጳ)otoo hin beekiin Gooftaa keenya qoricha keenya Iyyesuus Kiristoosiin mana isaaniitti simachuu danda’anii jiru. Nutis keessummaa kabajuufi simachuu, abbootii keenya kabajuun akka nurraa eegamu nubarsiisa.
Waaqayyo kan Hir’ate Akka Nuuf Guutu Amanuu
Gooftaan erga isaan waliin gale booda amantii fi hojii isaanii ilaale. Abdiin isaanii Gooftaa qofa ta’uu isaa, sodaa fi qaanii tokko malee kan isaaf ragaa bahan ta’uu isaanii, dhugaa ijaan argan fi kan gurraan dhaga’an malee soba kan hin dubbane ta’uu isaanii, waa’een fannifamuu, du’uu fi du’aa ka’uun Gooftaa isaan biratti iddoo guddaa akka qabu fi amantaa isaaniitiif iddoo guddaa akka qaban ega ilaalee booda Gooftaan mana isaanitti waliin galuuf eeyyama isaa ta’e. Nyaatas eebbisee kenneefii ija isaanii bane, akka Gooftaa arganis taasise. Egaa, imaltoonni kuni eebba kana hunda kan argatan Waaqayyoo hir’ina isaani akka guutu amantaa waan qabaniif dha. Kanaaf, nutis nyaata bara baraa kan ta’e Foon fi Dhiiga Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosiin fayyina bara baraa akka argannu sodaa fi qaanii tokko malee dhugaan raga bahuu, abdii keenya Gooftaa qofa gochuu, walharkaa fuudhinsa (ትዉፊት) amantaa fi seera Mana Kiristaanaa keenyaa kabajuu akkasumas hir’ina keenya kan guutu Gooftaa akka ta’e amantaa qabaachuun nurraa eegama.
Akkuma imaltoonni yeruma sana hatattamaan gara Iyyerusaaleemitti deebi’an, nutis yeroo otoo hin fudhatin hatattamaan gara Mana Kiristaanaa deebinee akka jiraannu Gooftaan nu haagargaaru. Ameen!
Gargaarsi Waaqayyoo nurraa hinfagaatiin!
May 6, 2016 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Caqasawwan ka’umsa isaa booda namootatti mul’achuu keessaa :
Gaafa du’aa ka’e yeroo jalqabaaf Maariyaam ishee Meqdelootti mul’ateera. Yoh 20:11-18.
Dubartoota biroottis mul’ateera. Maat 28:1-10
Qulqulluu Pheexiroositti mul’ateera .Luq 24:34,1Qor 15:3
Imaltoota Eemaahusitti mul’ateera Luq. 24:13-35,Luq. 24:36-43,Yoh 20:19-25
Gaafa guyyaa 8ffaa duuka bu’oota hundatti argameera. Yoh 20:24
Duuka bu’ootatti qarqara laga Galiilaatti argame . Yoh 21:4
Namoota 500 tti al takkaatti argame 1Qor 15:7
Yeroo gara samiitti ol bahu barattoota isaatti argame Luq. 24:44-53,Hoji Erga 1:6-11
Egaa walumaa galatti, guyyaan ka’umsa lammataa jedhamu kun guyyaa Gooftaan du’aa ka’uu isaa akka itti amananiif duuka bu’ootatti mul’ate ta’uu isaa ni hubanna. “Lammata” kan jedhameefis Gooftaan al-lama waan du’aa ka’eef miti. Garuu, mul’achuusaa kana dura duukaa bu’ootni warreen kaan bakka jiranitti mul’atee akka ture agarsiisufidha. Dabalataanis sirni guyyaa kana Bataskaana keessatti raawwatamu hundi isa guyyaa Du’aa Ka’umsaa waliin tokko waan ta’eef (yeroo lammataaf dabalamee waan gaggeeffamuuf) akka ta’e ni ibsama.
Seenaa Guyyaa kanarraas waa hedduu baranna. Muraasa isaanii caqasuuf:
1. Namoota du’aa ka’umsa isaa hin amanneef ka’uun isaa wangeela irratti caqasoota armaan olii irratti ni mul’ata. Beektonniiifi namoonni gurguddoon hedduun du’aniiru ,du’aa kan ka’an garuu yoo jiraatanillee fedha fi humna Isaatiin dha (Yoh.11 irratti du’aa ka’uu Al’azaar akkuma dubbisnu). Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos garuu aangoo isaan du’a moo’ee ka’eera
2. Mana cufaa osoo hin baniin seenuu isaa:Dubroon Maariyaam dubrummaadhaan deesse yommuu jedhamu namoonni tokko tokko ni shakku. Mana cufaa osoo hin banamiin seenee gidduu duuka bu’ootaa dhaabachuu isaa onneerraa namni amanu Gooftaan dubree irraa dubrummaan dhalachuu Isaa gonkumaa amanuuf hin rakkatu
3. Gooftaan Wangeela Yohaannis irratti kan hin barreeffamneen ala raajiiwwan hedduu duuka bu’oota fuulduratti akka raawwate Yoh 20:30 irratti ni ibsa. Fakkeenyaaf,Raajiiwwan hin barreeffamiin hafan keessa tokkommoo harki Toomaas gubachuu isheeti. Toomaas harkaan tuqamuusaa argee “Gooftaakoo” jedhe (foon uffachuusaa ibsuuf); waan harkisaa gubateefimmoo “Waaqakoo” jedheera (abiddummaan akkeenyaa Waaqummaa waan ta’eef). Kitaabolii dhalatoo (fkn Raajii Iyyesus) irratti garuu raajiin kuni ifaan barreeffameera. Kunis Kitaaboliin dhalatoo yaada Kitaaba Qulqulluu irra jiran caalaatti ifa gochuuf malee qabiyyee addaa akka hinqabne kan nuuf mirkaneessudha. Dabalataanis namoota Kitaaba Qulqulluu keessaa kitaabota 66 malee hin fudhannu warra jedhaniif deebii dha.
4. Amantiin waan argan qofa osoo hin taane waan dhagahanis fudhachuunidha.Nuti Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoositti kan amannu raajii hojjete hunda kan gurraan dhageenye akka ijaan agarretti fudhachuuni dha.
5. Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos du’aa ka’ee gara samiitti ol osoo hin bahiin dura guyyoota afurtama (40) keessatti namoota adda addaatti mul’achuun faana dudubbateera, of -tuqsiiseera,faana deemeera,faana nyaateera. Erga du’a mo’atee ka’eellee akka namaa tuqamuufi nyaachuun Isaa kunis foon Giiftii keenya Qulqulleettii Maariyaamii qabatee ka’uusaa, yeroo dhufaatii Isaa lammataas foonuma kanaan murtoof akka dhufu kan mirkaneessudha. Shakkitoonni “foon Maariyamii inni Gooftaan uffatee ture du’ee awwaala keessatti hafeera; Waaqummaan Kiristoos garuu adda bahee humnaan ni ka’e” jedhanis kanaan mo’amaniiru.
Nagaan Waaqayyoo hunda keenya waliin haa ta’u;ameen.
Madda: Hiikkaa wangeela Yohaannis (Yoh.20:24-30)